मध्यरातको निर्णयपछि विद्या भण्डारी पुनः राष्ट्रपति बन्ने निश्चित, कहिलेसम्म हुन्छ शितल निवासको बास? – MySansar
Posted on March 7, 2018 March 7, 2018 by Salokya
5 thoughts on “मध्यरातको निर्णयपछि विद्या भण्डारी पुनः राष्ट्रपति बन्ने निश्चित, कहिलेसम्म हुन्छ शितल निवासको बास?”
बिगतमा प्रधान मन्त्रि, मन्त्रि परिषदले मात्रै होईन बहुमत भयको पार्टीको सांसदहरुले गलत कुरा पनि गर्न सक्छन भन्ने कुरा हामीले देखे सुने कै कुरा हो/ यस्तै फेरी पनि कसै बात नहोला भन्न पनि सकिंदैन/ किनभने बिगतमा गल्ति गर्ने नै अहिले पनि सदन र सरकार चलाउँदैछ र इनिहरुले फेरी पनि कुनै गलत कार्य खोजेमा रास्त्रपतिले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन/ रोकेमा रास्ट्रपति माथि संबिधान बिपरित आचरण गरेको आरोप लाग्न सक्छ/ संबिधानमा यस्तो ब्यबस्था किन गरे भन्ने प्रशंको उतर पनि हामीले पाउने त् हुँदै होईन/
तेसैले यो पदमा जो रहे पनि केहि फरक पर्दैन र कोहि नियुक्त भयमा त्यो बारेमा सब्द खर्चिनु बात राम्रो भन्दा नराम्रो नै हुने देख्छु किनभने आजको परिस्थिमा राम्रो कुरा पाउनु अधिकार र सम्मान पनि नागरिकहरुलाई खुसि हुने काम गरेर होईन नेता र दललाई खुसि बनाउने मात्रै पाउने कुरा नेपालमा आखा नदेख्नेले पनि देख्ने कुरा भयको छ/ यस्तो नभयको भय नेपालमा अहिले ठुला पदहरुमा नियुक्त भयका भन्दा फरक व्यक्तिहरुनै नै नियुक्त भयको हामीले देख्ने मौका पाउने थियो जस्तो लाग्छ/ अन्तमा म यति त् भन्छु नै कि नेपाल र नेपालि जस्तो ब्यबस्था पाउनु पर्ने थियो र जसलाई जुन स्थानमा हामीले देख्न पाउनु पर्ने थियो त्यो हामीले अझै पायको छैन/
उफ। अब फेरी कति व्ययभार बेहोर्नु पर्ने हो राष्ट्रले महँगा साडीको लागी?
धन्यबाद … तेही नै लागे थिओ ..
कुरो नैतिकता मै गएर अड्किने भयो 😉
त्यो त ठिकै छ… तर रास्ट्रपति भै सकेको मान्छे त कुनै पार्टी को कार्यकर्ता नभई स्वतन्त्र र Unbaised हुन पर्चा हैन र? फेरी कसरि वहा ए मा ले को उमेद्वार हुन मिल्छ र? सालोक्य जी ब्याख्या गरि दिनु होला …
उहाँ कानुनी रुपमा एमालेको उम्मेदवार हैन। उहाँले उम्मेदवारी दिने र त्यसमा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने हो। भन्नलाई यसो भने पनि खासमा चाहिँ एमालेकै उम्मेदवार हो फेरि 🙂